DZIDZISO YEMAOKO Vagadziri uye vanotengesa - China DZIDZISO YEMAOKO Fekitori
Pamberi Pazasi Rearward Kudzora Arm YeBENZ-Z5130
NEI KUDZORA ZVEMAOKO KUKOSHA? Kudzora maoko kunopa zvese zviri zviviri kubatana uye pivot poindi pakati pekumiswa kwemotokari yako uye chassis. Kazhinji kubatanidza gogo rekutenderedza kumuviri wemuviri, kudzora maoko kunosanganisira majoini ebhora uye bushings ayo anoshanda ari tandem kuchengetedza chaiyo vhiri yekutevera uye chinzvimbo. Semuenzaniso, yakadzika yekudzora ruoko inobatsira mukumisikidza iyo yekureba uye yekumira chinzvimbo chevhiri apo mota iri kufamba. Kudzora maoko kudzivisa kuwanda kwemauto ekurodha, akadaro ...
Anogadziridzwa Kumashure Kudzora Arms KweAudi - Z5137
Ruoko rwekutonga runounganidza bhora mubatanidzwa uye bushing pane yakasimba-simba muviri. Chikamu chebhora chakabatana chinoshanduka zvakapfava nekubatana nemakwenzi akashongedzerwa nezvikamu zvakasiyana zvekumisa uye vhiri. Irabha bushing inogadzirisa zvakachengeteka muviri wemotokari uye ruoko rwekudzora uye inotora kuvhunduka. ■ Muviri une Simba Iine simba rekudzora ruoko rwemuviri unokwanisa kutsigira kumisa zvikamu kuburikidza neyakaipisa simbi yakasimba simbi uye isina huremu yealuminium alloy yakagadzirwa zvinhu. ■ Strong Surface Kurapa Tangrui ine eleTangru ...
Kuruboshwe Kumberi Kuderera Kudzora Arm Oem Ye Honda Pilot -Z5133
Chii chinonzi kudzora maoko? Dzora maoko, dzimwe nguva anonzi "Maoko," ndiwo musimboti wepamberi yako yekumisa system. Mumashoko akareruka, kudzora maoko ndicho chinongedzo chinobatanidza mavhiri ako epamberi kumota yako. Mumwe mugumo unobatana negungano revhiri uye mumwe mugumo unobatana kune fomati yemota yako. Ruoko rwekumusoro rwekubata runobatana kune yekumusoro nzvimbo yegumbo repamberi uye rezasi rekudzora ruoko rinobatana kune yepazasi nzvimbo yevhiri rekumberi, nemaoko ese ari maviri achibatanidza kune furemu yeiyo ca ...
Aluminium Brand Nyowani Yepamberi Kudzora Arm YeAudi-Z5139
Tangrui Oem Yekutanga Kudzora Arm KwePorsche-Z5140
6L8Z-30-78AA Uye YL823078AA Kudzora Zvombo zveKUGA-Z5142
Tendeukira kuTangrui yekutungamira & kumisa. Maoko edu ekudzora uye track yekudzora maoko ndiwo chaiwo anoita. Sechinhu chakakomba dhizaini yemotokari uye chikamu chakakosha chegadziriro, iwe unofanirwa kusarudza ruoko rweOE kudzora ruoko. Ndosaka iwe uchigona kutendeukira kuna Tangrui kune akavimbika mudhiraivhu & kumiswa zvikamu. Sei uchifanira kuvimba Tangrui yekudzora maoko? Maoko edu ekudzora anowana 100% kutsemuka kwekutsemuka uye kuongororwa kwekukanganisa kwekukanganisa kuona kuti zvinhu zvinoenderana neOE ...
OEM TD11-34-300B uye TD11-34-350B DZIDZISO YEMAHARA YeMazda -Z5146
Hight Hunhu Kudzora Arms OEM 54500-3S000 Ye HYUNDAI SONATA-Z5149
Mberi Inogadziriswa Yekumusoro Kudzora Arms Inokodzera Audi-Z5138
Tangrui Yakasarudzika Kudzora Arm Inokodzera Ford-Z5141
Yakanaka Kudzora Arms Detail Dhizaina Inokodzera Honda - Z5143
Shock Inotora Bolt, Shock Yekupinza Rubber, Mberi Kudhiraivha Gonhi, Hood Shock Inotora, Wheel Hub, Tire Bhora Rakabatana,